Erayo Jaceyl - Boga Mucaashaqiinta
Erayo Jaceyl Boga Mucaashaqiinta
Haddii aad ku cusub tahay Erayojaceyl.com waxa ugu fiican ee la sameeyo ayaa ah inaad ka bilowdo kamid noqoshada bahda Erayo Jaceyl oo in ka badan 10,000 oo qof ay horeyba isaga diiwaangeliyaan kagana faaideysteen qormooyinka xiisaha leh ee halkaan ka socdo. Sidee uga mid noqon karaa hadaba? Jawaabta
Halkaan kaga bogo: Erayo jaceyl oo soo jiidasho leh. Farxad beey inoo tahay inaad soo heshay boggeena Erayojaceyl.com, boga mucaashaqiinta. Halka aad kaga bogan doonto erayo jaceyl oo soo jiidasho leh iyo wax walbaa oo ku saabsan safarka dheer ee nolosha. Alla murugo jaceyl maxaa ibaday? Haddii aa nahay dhalinyaro waxaan dooneynaa inaan barano erayo jacayl qiiro leh, hadaan si kale u iraahdo erayo jaceyl oo xul ah, erayo jaceyl dareen leh. Waxaan sidoo kale dooneynaa inaan awood u yeelano qaabka loola hadlo gabdhaha/wiilasha si dabacsan iyo wixii ka sareeyo: Bilaa cabsi. Inaad baratid erayo jaceyl oo macaan barashadooda ma ahan sida cilimiga gantaalaha! Asal ahaan wax fudud.
Aniga laftirkeyga markaaan yaraa waxaan sameeyay qaladaad faro badan balse ugu dambeys waxaa noqday xidiga gabdhaha. Waxyaabihii iigu yaabka badnaa waxay ahaayeen, gabar walbaa oo aan arko horaan ka caashaqi jiray, markaan isdhaho la hadal oo u sheeg rabitaankaaga, wadnaha ayaaba dhug dhug idhahayo. Waan daba soconayaa isla markriiba Waxaan arkayaa gabadhii oo albaabka xiratay. Shit!
Maalintii dambe ayaa hadana banaanka ku sugayaa xiliga ay dukaanka soo aadeyso xiliyada habeenkii, waan soo raacayaa markaan is dhaho la hadal gabar kale ayaaba ka soo hor baxeyso ama anigii ayaaba asxaab kale oo aan is naqaano iga soo hor baxeyso oo aan is dhahayo yeysan ku dareemin inaad qoftaan gaad gaadeyso. Aniga ciil, madaxaa ayaan gacmaha saartaa, anigoo ka xun nasiib daradeyda.
Maalinta kale ee xigta ayaan hadana go,aan gaari, wax walbaa oo dhacaa ha u joojin xittaa haddii hooyadeed kaa soo hor baxdo, Maxaad u xishooneysaa, maxaad uga cabsaneysaa iyo su,aalo kale, haddii ay ubadato waxa ay ku dhaheysaa iga raali noqo qof kale ayaan saaxib la ahay. Su,aalahaasi kadib markaan go,aan gaaro ayaan hadana bilabayaaa is gaad gaadkii ugu dambeeyay anigoo isku kalsoon misana aanan waxba ka baqeynin. Waan soo baxayaa markaan soo dabo kaco qoftii maba aqaano halkii aan ka bilaabi lahaa calashaan erayo aan iyada kula qabsado. Waan fikiraa, tolow xagee wax ka bilaawdaa, waxaad ubaahantahay halmar oo kaliya oo aad la hadashid misan albaab walbaa oo kaa xiran wuu kuu furmi. Hadaba waa inaad xal raadiso, Baro labo eray oo aad ku istaajin karto markey socoto, markey taagan tahayna aad ku fariisan karo. Nasiib daro waa gaasi ma jirin Google ama sida bogaan Erayojaceyl.com oo kale si, aan qish uga helo, kana faaiido qaladaadka dadka kale.
Markaad qof jeclaatid waxaad ubaahantahay erayo dabacsan oo aad ku soo jiidan karto qofkaasi. Adeegsiga erayo jaceyl oo soo jiidasho leh waa waxa ugu fudud ee aad qofka ku kasban karto. Sidoo kale waa lagama maarmaan adeegsiga erayo kaftan ah misana aanan waxba u dhimeynin qofkaasi. Erayada kaftanka loo adeegsado waxaan kuugu diyaarinay halka hoose. Marka ugu horeyso sida gabdhaha/wiilasha loola kaftamo waxaa laga yaabaa inay wax weyn kula noqoto balse maalmo kadib waxaan hubaa inaad noqon doonto xidiga/xidigta dadku ay ka helaan. Hadaba halkani waxaan ku soo bandhigeynaa qaar kamdi ah erayo jaceyl oo aan ugu talo galnay mucaashaqiinta ku jiro xiliga haasaawaha.
1. Waxa ugu quruxda badan ee la helo nolosha ayaa ah Jaceyl, haduusan jirinna noloshu macno malahan. Mararka qaar noloshaada waxaa ku soo biiri doono qof kaa jeclaan doono wax walbaaa, farxadaaduna ay tahay farxadiisu, ilmadaaduna ay dhibeyso, haduu qofkaasi noloshaadu ku jiro ilaasho, noloshaadu waa qaali.
3. Guurku waa nasiib, furiinkuse waa go,aan, murugtu waa nasiib, farxaduse waa go,aan, in noloshaada qof ku jiraaa waa nasiib, inaad ilaashataaa ama ka tagtaana waa go,aan, dhamaanteen nasiib mal lihin laakin waxaan leenahay go,aan.